Akhriso xog laga helayo kulan muhiim ah oo xalay ka dhacay madaxtooyada (sawirro)
Home » WARARKA MAANTA » Akhriso xog laga helayo kulan muhiim ah oo xalay ka dhacay madaxtooyada (sawirro)	Akhriso xog laga helayo kulan muhiim ah oo xalay ka dhacay madaxtooyada (sawirro)
19/04/2017	800 Views Waxaa xalay madaxtooyada Soomaaliya ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen madaxweynaha Soomaaliya, wasiirro ka tirsan xukuumadda, iyo hoggaamiyaha maamulka Ahlusunna ee gobalada dhexe.
Kulankan ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku saabsan wadaxaajoodyada Muqdisho uga billaabanaya Ahlusunna iyo Galmudug, kaas oo looga gol-leeyahay in lagu mideeyo labada dhinnac.
Wararka laga helayo kulanka ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya, wasiirrada arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha, iyo mas’uuliyiin kaleba ay ku dhiirrigeliyeeh hoggaanka Ahlusunna in uu muujiyo ka-go’naasho ku saabsan in laga miradhaliyo wadaxaajoodka socda.
Dhankiisana, hoggaamiyaha Ahlusunna Shiikh Axmed Shaakir Cali ayaa madaxda dowladda u ballanqaaday in uusan waxna ka hagran doonin ka-guul-gaarista wadaxaajoodka socda, si loo dhiso maamul loo dhan yahay.
Previous: Dhegeyso: Xildhibaanno ka tirsan Hirshabeelle oo baaq culus diray
Next: AMISOM oo burburisay warshadda dharka ee Balcad (ogow sababta ka dambeysa)